News by रवीन्द्र राज ओझा | Lumbini Online Patrika
काठमाडौँ, १२ जेठ । वीर अस्पताल सरसफाई अभियान शुरु भएको आज २० दिन पुग्यो । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्यालले गत २३ बैशाखमा वीरमा पुगेर अभियानको शुभारम्भ गरेकी थिइन । त्रिभुवन इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, पशुपतिनाथ मन्दिर लगायतका विभिन्न महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलको सरसफाई गरी गरि चर्चामा र...
कञ्चनपुर– नवजात शिशु हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा भीमदत्तनगरपालिका– १३ की ३० वर्षीया गंगा ओखेडा र सोही ठाउँका १९ वर्षीय सन्तोष ओखेडा रहेका छन् । गंगाका श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीका लागि कतारमा रहेका बेला उनले सन्तोषसँग अनैतिक सम्बन्ध बनाइ ...
निदाइरहेको बेलामा एकपछि अर्को विचार, भावना र संवेदना अचेतनरूपमै मस्तिष्कमा आउनु सपना देख्नु हो । मानव इतिहासमा धेरै प्रयास भए पनि व्यक्तिले किन कुनै किसिमको सपना देख्छ र त्यसको अर्थ के हुन्छ, राम्ररी बुझ्न सकिएको छैन । सपना विभिन्न किसिमका (डरलाग्दो, साहसिक, रमाइलो तथा यौनसम्बन्धी) ह...
“खेम सर, मेरो त डबल पेन्सन हुने भो नि,” रूद्र जीसीले एक दिन खेम बस्नेतलाई नारायणपुरमा सुनाए । खेम बस्नेत जिल्ल परे । स्वाभाविकै पनि थियो । सल्यानबाट सँगै तुलसीपुर झरेका थिए दुई भाइ, चौवालीस सालतिर । सँगै नै घर–घडेरी जोडेका थिए र लगभग सँगै जागिर पाएका थिए, एउटा निम्न माध्यमिक विद्यालय...
डडेल्धुरा, जेठ १२ । नेपालमै पहिलो पटक सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा डडेल्धुराको उग्रतारा सार्वजनिक यातायातबाट शौचालय र चमेनागृहसहितकोे अत्याधुनिक सुविधाको बसमा आगलािग भएको छ ।…. शुक्रबार काठमाडौँबाट डडेल्धुराको लागि छुटेको बा ४ ख ८४९२ नम्बरको उग्रतारा यातायातको गाडीमा विहान करिब ...
मृत्युका धेरै कारण छन् । केहीबेर अघिसम्म स्वस्थ भनिएको मानिस केहीबेर पछी अकास्मात मरेको खबर पाईन्छ भने कस्तो होला ? कुनै दुर्घटनाको कारण हुने मृत्युको कुरा फरक छ, तर आफ्नै स्वास्थ्य र आफ्नै सरिरको कुनै अंगले एक्कासि काम गर्न छाडेपछी हुने मृत्युलाई कसले रोक्न सक्ला ? यस्तै स्थिति हो हर्ट...
शुक्रवार जेठ ११ २०७५
काठमाडौं- चितवनका विभिन्न स्थानका कुखुरामा बर्डफ्लु फेला परेलगत्तै काठमाडौंका हाँसमा पनि बर्डफ्लु फेला परेको छ। काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिकास्थित धर्मस्थली– ६ मा हिरा तामाङले पालेको हाँसमा बर्डफ्लु फेलापरेको हो। बर्डफ्लु पुष्टि भएपछि तामाङले पालेको हाँस र कुखुरा नष्ट गर्ने काम ...
रक्त दान जीवन दान ,रक्त दान महादान भन्ने मुल नारा लाई आत्मसात गर्दै ,बुटवलको मिलन चोक 11 स्थित जागृति बहुदेशिय सहकारी संस्था लिमिटेड का शेयर सदस्य हरु बाट 30 युनिट रगत ,रक्त संचार गृह बुटवलमा संकलन भएको शेयर सदस्य दिपक कुमार चालिसे ले जानकारी गराउनु भएको छ। सहकारी का अध्यक्ष गणेश प्र.भट...
बिहे पछि एउटा नयाँ जिन्दगी सुरु हुन्छ । विशेष गरि बिहे पछि महिलाको जिन्दगीमा धेरै परिवर्तन आउँछ । उनीहरुको बोली चाली देखि हरेक कुरामा परिवर्तन आउँछ । पुरै जिन्दगी बदलिन्छ र यो समायोजन गर्न अलि समय पनि लाग्छ । साथै उनीहरुको शरीरमा पनि परिवर्तन देखिन्छ । आखिर बिहेपछी किन यस्तो हुन्छ त ? उ...
डडेल्धुरा, जेठ ११ । डडेल्धुरामा चट्टयाङ लागेर १३ जना घाइते भएका छन्। जिल्लाको भित्री मदेश क्षेत्रमा पर्ने परशुराम नगरपालिका–६ छेलाका २ वटा घरमा बिहिबार साँझ ६ बजेतिर चट्टयाङ्ग पर्दा उनिहरु घाइते भएका हुन्। पानी र हावाहुरीसंगै आएको चट्टयाङले लाग्दा छेला गाउँकी ३३ वर्षीय रेग्मादेवि बो...